Sebenzisa ekhaya umshini wokugaya irayisi onomthamo omncane othunyelwe e-Afrika
1.Umklamo wemishini yokugaya ilayisi futhi usetshenziswe ekhaya,ukusebenza okulula futhi ngemininingwane imfundo.small umthamo wokugaya irayisi kufanelekile ukusetshenziswa kwekhaya lomlimi ezweni.
2.Ukusetshenziswa kwasendlini umshini wokugaya irayisi kungagaya i-paddy ngqo kwilayisi elibunjiwe futhi kuhlukanise irayisi ephukile, i-rough bran kanye ne-bran ecolekile ngasikhathi sinye.
Imininingwane Yomkhiqizo yokusetshenziswa kwekhaya irayisi
ekhaya kusetshenziswa umshini wokugaya irayisi noma umshini wokugaya irayisi wokuwugaya umshini wezolimo obusetshenziselwa ukulungisa ukucubungula ukususa amakhoba (ama-husks angaphandle) okusanhlamvu kwelayisi. Kuwo wonke umlando, kube nezindlela eziningi zokusebenzisa irayisi. Ngokwesiko, umshini wokusebenzisa irayisi wokugaya ungaphayazwa kusetshenziswa uhlobo oluthile lodaka nepestle. Umshini wasendlini olula wokusebenzisa umshini wokugaya irayisi ukwenza lokhu yi-pounder yelayisi. Kamuva kwenziwa imishini esebenza kahle kakhulu ukuze ishube futhi ipole irayisi. Le mishini yokugaya irayisi ithuthukiswa kakhulu futhi isetshenziswa emhlabeni wonke.
Umshini wokugaya irayisi wekhaya uqaphela inhloso yokudlikiza nge-Press and twist force phakathi kwe-roller kanye nangomfutho wesisindo. Ama-roller iron angasetshenziselwa ukukhonkotha amakhoba e-paddy.andisetshenziswe ku isitshalo sembewu yelayisi esincane ukusetshenziselwa ifektri encane.Ingxube yezinto ezibonakalayo ezihlanganisiwe ihlukaniswe ilayisi elinsundu kanye ne-husk yempi yomoya egumbini lokuhlukanisa lomshini wokugaya irayisi wasekhaya.
Izici zomshini wokugaya irayisi wasekhaya
1.ukusetshenziswa kwasekhaya irayisi yokugaya irayisi isetshenziswa ikakhulu i-paddy irayisi hulling,ingathambisa i-paddy ibe ilayisi elimhlophe.
2.Umsebenzi ophephile.umshini wokusebenzisa umshini wokugaya irayisi uvame ukusebenza esimweni esigcwele sokulayisha,asikho isidingo sokukhathazeka ngokulayisha ngokweqile noma isikhathi eside sokusebenza.
3.Lo mshini wokugaya irayisi wekhaya ungalingana nenjini ka-dizili noma kaphethiloli esikhundleni semoto kagesi uma amandla kagesi engatholakali.Ngempela lo mshini wokugaya irayisi othunyelwe e-Afrika ,amanye amakhasimende asicele ukuthi sihambisane nodizili noma uphethiloli .
4..Kulula ukusebenza.Qalisa umshini wokugaya irayisi,lawula isibambo sokucindezela.Rice lizophuma ngaphandle kwamakhoba.
5.Umbala wokusebenzisa umshini wokugaya irayisi ungapeyintwa ngokuya nge-need.we yakho futhi unikeze insiza ye-OEM.
Amapharamitha obuchwepheshe womshini wokugaya irayisi wasekhaya
ividiyo yomshini wokugaya irayisi wekhaya
Sithinte Ukuze Sisebenzise i-Home mill yelayisi